Xafiiska Q.M ee Soomaaliya oo Shaaciyey Tirada Dadka Sanadkaan Ku Dhintay Weerarada Alshabab – Radio Daljir
Xafiiska Q.M ee Soomaaliya oo Shaaciyey Tirada Dadka Sanadkaan Ku Dhintay Weerarada Alshabab
Abriil 12, 2017 9:27 b 0
War kasoo baxay Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarada Kooxda Al Shabaab ka geesanayaan magaalada Muqdisho ay kordheen sanadkan 2017-da marka loo eego sanadihii hore.
Qaramada Midobay ayaa si kulul u camnbaareysay weerarada Al Shabaab ka geesanayaan magaalada Muqdisho , waxa ayna sheegtay Qaramada Midoobay dadka ugu badan ee dhibka kasoo gaaro weeraradaasi ay yihiin shacabka .
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in weerarada sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho lagu dilay dad gaaraya 337 Qof oo u badnaa shacab halka tiro intaa ka badana ay ku dhaawacmeen.
Michael Keating ayaa tilmaamay in Weerarrada Al-shabaab ka geestaan magaakada Muqdisho ay kor u kaceen 50%, waxa uuna intaa raaciyay tirada ugu badan dadka lagu dilay weeraradan in ay yihiin shacab aan wax dambi ah gelin.
Warkan kasoo baxay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in 10-kii malamood ee lasoo dhaafay weerarada Al Shabaab ka geesteen magaalada Muqdisho gaarayaan 12 weerar , waxaana la sheegay in weeraradaasi lagu dilay dad ka badan 28-qof oo shacab u badan.
Warbixin-Marxaladihii Ay Soo Mareen Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya